Jewels စျေး - အွန်လိုင်း JWL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Jewels (JWL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Jewels (JWL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Jewels ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $16 361 567.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Jewels တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Jewels များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JewelsJWL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.339JewelsJWL သို့ ယူရိုEUR€0.286JewelsJWL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.258JewelsJWL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.309JewelsJWL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.05JewelsJWL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.13JewelsJWL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč7.52JewelsJWL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.26JewelsJWL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.451JewelsJWL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.47JewelsJWL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$7.59JewelsJWL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.63JewelsJWL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.82JewelsJWL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹25.43JewelsJWL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.57.25JewelsJWL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.465JewelsJWL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.51JewelsJWL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿10.57JewelsJWL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.36JewelsJWL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥35.81JewelsJWL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩402.38JewelsJWL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦129.16JewelsJWL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽24.91JewelsJWL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴9.41
JewelsJWL သို့ BitcoinBTC0.00003 JewelsJWL သို့ EthereumETH0.00085 JewelsJWL သို့ LitecoinLTC0.00562 JewelsJWL သို့ DigitalCashDASH0.00326 JewelsJWL သို့ MoneroXMR0.00358 JewelsJWL သို့ NxtNXT24.26 JewelsJWL သို့ Ethereum ClassicETC0.0468 JewelsJWL သို့ DogecoinDOGE94.08 JewelsJWL သို့ ZCashZEC0.00337 JewelsJWL သို့ BitsharesBTS12.89 JewelsJWL သို့ DigiByteDGB12.41 JewelsJWL သို့ RippleXRP1.1 JewelsJWL သို့ BitcoinDarkBTCD0.0114 JewelsJWL သို့ PeerCoinPPC1.19 JewelsJWL သို့ CraigsCoinCRAIG150.63 JewelsJWL သို့ BitstakeXBS14.1 JewelsJWL သို့ PayCoinXPY5.77 JewelsJWL သို့ ProsperCoinPRC41.48 JewelsJWL သို့ YbCoinYBC0.000178 JewelsJWL သို့ DarkKushDANK106 JewelsJWL သို့ GiveCoinGIVE715.53 JewelsJWL သို့ KoboCoinKOBO73.82 JewelsJWL သို့ DarkTokenDT0.313 JewelsJWL သို့ CETUS CoinCETI954.04